ကျွန်တော့်ရဲ့ သေးငယ်လှသော နှစ်ယောက်အိပ် ခုတင်လေးကနေ မှန်းဆကြည့်ရရင် အတော့်ကို ဝေးလှသော သစ်တောအုပ်ကြီးရဲ့ အလယ်မှာ ရေအိုင်ငယ်လေးတစ်ခုရှိပါတယ်။ မကြာခဏဆိုသလို သစ်တောအုပ်အလယ်က ရေကန်လေးဆီ လမ်းကျဉ်းကျဉ်းလေးမှ တစ်ဆင့် ကားမောင်းသွားရင် အရာအားလုံးကနေ ခဏပုန်းကွယ်ရတာ ဘယ်လောက်ကောင်းတယ်မှတ်လဲ။ သစ်ပင်ကြီးတွေ အုံ့ဆိုင်း နေတဲ့ အလယ်မှာ တောင်ကျချောင်းလေးမှတစ်ဆင့် ကြည်လင်ကျယ်ပြောသော ရေကန်ငယ်တလျှောက် လမ်းလျှောက်ရတာ တကယ် ငြိမ်းတယ်။
နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်ပျော်သွားတဲ့ ညတစ်ညမှာ အဲဒီသစ်တောအုပ်အလယ်က ရေကန်မှာ ရောက်နေခဲ့တယ်လို့ အိပ်မက်ပါရဲ့။ မကြာ ခဏအနားယူလှဲလျောင်းတဲ့ ကျောက်ဖျာပေါ်မှာ အ၀တ်မပါ ဗလာကိုယ်တည်းလှဲလျောင်းလို့။ ရေခဲပုံး၊ စားကောင်းသောက်ဖွယ်တွေထည့် ထားတဲ့ခြင်း၊ ပြီးတော့ နေ့လည်ခင်းမှာသောက်ဖို့ ၀ိုင်ချိုချိုတွေပါသတဲ့။ ကျွန်တော်ငါးမျှားမနေခဲ့ပါဘူး။ ကမ်းခြေကို နုညံ့စွာပုတ်ခတ်နေ တဲ့ ရေလှိုင်းခတ်သံနှင့် သဘာဝတောကောင်ငယ်တွေရဲ့ အော်မည်သံ သဲ့သဲ့တွေကို နားထောင်ရင်း ရေကန်အစပ်က ၀က်သစ်ချပင် အောက်မှာလှဲလျောင်းနေတာပေါ့။
လူသူအလာနည်းတဲ့ နေရာဖြစ်တာကြောင့် ကိုယ်ပိုင်နေရာလို လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေလို့ရတာအမှန်ပါပဲ။ ရေကန်တစ်ဝိုက် ကျွန်တော် တစ်ယောက်တည်းရှိနေတာဆိုတော့ အဦးဆုံးကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာက ၀တ်ဆင်ထားတဲ့ အ၀တ်ဟူသမျှ ချွတ်ကာ အ၀တ်မပါ စိတ်လွတ် ကိုယ်လွတ်နေလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ နွေရာသီကာလရဲ့ အလယ်ပိုင်းဖြစ်တာကြောင့် နွေးထွေးသော နေ့လေးတစ်နေ့ဖြစ်နေတာပေါ့။ ကန်ရေပြင်က ဖြတ်သန်းတိုက်ခတ်လာသော လေနုအေးတွေက ကျွန်တော့်ရဲ့ အ၀တ်မပါ အသားဆိုင်တွေကို အံ့အားသင့်ဖွယ် ခံစား မှုတွေပေးရဲ့။
အေးဆေးငြိမ်သက်သော ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အိပ်ပျော်ခါနီးအချိန် ကျွန်တော့်မျက်လုံးထောင့်စွန်းနားက ရိပ်ကနဲလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုမြင်လိုက်ရပါ တယ်။ တစ်စုံတစ်ယောက်သောသူဟာ ခြုံပုတ်တွေကို တိုးဝင် ရေကန်ရှိရာကို လာနေခြင်းပါပဲ။ အပေါ်စီးရောက်နေတဲ့ ကျွန်တော်လှဲ လျောင်းရာနေရာလေးကြောင့် ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသူကို ကောင်းကောင်းမြင်ရမယ့် အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ သူ သို့မဟုတ် သူမ တော့ အရိပ်ထဲပုန်းနေတဲ့ ကျွန်တော့်ကို ရုတ်တရက်မြင်နိုင်မယ်မထင်။
ရုတ်တရက် မြင်ကွင်းထဲကို အသက်၁၈နှစ်ထက်မပိုသေးသော အလွန်ချောမောသန့်စင်သည့် လူငယ်လေးတစ်ယောက်ရောက်လာပါ တယ်။ ဒီနေရာကို ငါးမျှားဖို့လာဟန်မတူ လက်ထဲမှာ ဘာငါးမျှားတံမှ မပါလာ။ တကယ့်ကို သူ့လက်ထဲမှာ ဘာမှယူဆောင်လာခြင်းမရှိပါ ဘူး။ ပိန်ပိန်ပါးပါးအရါယ်အစား ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာ ပါဝင်ပါတယ်။ အရပ်အမြင့်က ၅ပေ ၆လက်မလောက်ဆိုတော့ ကျွန်တော့်အရပ်အမြင့် ၆ပေထက်စာရင် နိမ့်တာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ကျစ်လစ်ကြံ့ခိုင်တဲ့ကြွက်သားတွေနှင့် ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ အညိုရင့်ရောင်ဆံနွယ်တွေက သူ့ပခုံး တ၀ိုက်မှာနေရောင်တွေနှင့် တောက်ပလို့ပါပဲ။ သူ့ရဲ့သမင်မျက်လုံးတွေထဲ မျက်ဆံအရောင်ကိုတော့ သေချာမမြင်ရပါဘူး အညိုဖျော့ ရောင်ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ သူ့အသွင်အပြင်က အရာအားလုံး perfect ဖြစ်လုနီးပါးပေါ့လေ။ လှပအေးချမ်းတဲ့နေ့လေးထဲမှာ အပြုံး လှလှနဲ့ မြင်ကွင်းထဲပေါ်ထွက်နေတာက ပန်းသွေးရောင် နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးရဲ့ ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်က ချစ်စရာ ပါးချိုင့်လေးနှစ်ပွင့်ကြောင့်။
ကောင်ငယ်လေးက သူ့အပေါ်တီရှပ်ကို ခေါင်းပေါ်ကနေဆွဲချွတ်လိုက်ကာ မြေပြင်ပေါ်ချလိုက်ပါတယ်။ ချောမွေ့ဖြူဖွေးတဲ့ ရင်အုပ်တွေကို လှစ်ဟပြရင်း။ နောက်တော့ သူ့ဂျင်း(န်)ဘောင်းဘီ ခပ်ကျပ်ကျပ်က ကြယ်သီးတွေကိုဖြုတ်တာ ခြေထောက်က ခြေညှပ်ဖိနစ် ဒီဇိုင်းဆန်း ဆန်းကို ကန်ထုတ်အပြီးမှာပေါ့။ ဂျင်းဘောင်းဘီကို သန်မာတဲ့ပေါင်တံတွေကနေ အတင်းခွာရင်း ခဏနေက အင်္ကျီပေါ်ထပ်ပုံလိုက်တယ်။ အတွင်းခံဘောင်းဘီဝတ်မထားတဲ့ သူ့အောက်ပိုင်းမြင်ကွင်းကြောင့် အသက်ကို ခက်ခက်ခဲခဲ ကျွန်တော်ရှူသွင်းမိရဲ့။ သူ့ငပဲမာပြီးတောင် လာရင် ဘယ်လိုနေမလဲ ကျွန်တော်မြင်ချင်မိပါပြီ။ ပုံသဏ္ဌာန်လှပ တစ်ရစ်တဲ့ ပေါင်တံနှစ်ခုကြားမှာတော့ ကြက်မလေးရဲ့ ဥတွေလို ရွှေဥ နှစ်လုံးက ကပ္ပယ်အိပ်ထဲတွဲကျလျက်ပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြန်သတိထားမိစဉ်မှာတော့ ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းအစုံက မြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းကို ပြူးကြည့်နေမိတာ ပြီးတော့ နှုတ်ခမ်းလွှာထဲမှ သွားရည်တွေ စိမ့်ထွက်လာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ရှက်လိုက်တာ..။
ဘယ်ကနေစပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာ ဦးခေါင်းထဲ ရှင်းသွားဖို့ ခေါင်းကိုခါရမ်းမိပါတယ်။ မျက်ဝန်းများကို ပြန်ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ကန်ရေ ပြင်ကျယ်မှာ သူကူးခတ်နေပါပြီ။ ရေပြင်မှာ ကူးခတ်နေတဲ့ ခြေတံတွေရယ် လှုပ်ရှားလိုက်တိုင်း ရင်ခုန်ဖွယ်မြင်ရတာက ၀ိုင်းစက်ပြည့်တင်း တဲ့ တင်ပါးအစုံပါပဲ။ ကြည်လင်နေတဲ့ ရေပြင်ထဲ အားရပါးရ ဆော့ကစားကူးခတ်နေတာ အချိန်အတော်ကြာမှ အပေါ်ကိုတက်လာပြီး ရေစပ်မှာ အသာရပ် ရေစစ်ပြီးမှ အ၀တ်ပုံရှိရာကို လှမ်းလာပါတယ်။ အ၀တ်ကိုကောက်ပြီးမော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှ ကျွန်တော့်ကို မြင် သွားပါရော။ သူ့ပါးပြင်မှာ ရဲရဲနီရှက်သွေးဖြန်းသွားပေမဲ့ အ၀တ်မဲ့ သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကို ဖုံးကွယ်ဖို့ မကြိုးစားတာတော့အမှန်။
ကျွန်တော် ထထိုင်လိုက်ရင်း သူ့ဆီလက်လှမ်းပြလိုက်ကာ 'ဟေး...ညီလေး... ကိုယ်နဲ့အတူ လာစားပါလား။ နှစ်ယောက်စာ အစားအစာ တွေ ခြင်းထဲမှာအပြည့်၊ ပြီးတော့ ၀ိုင်အေးအေး ဒါမှမဟုတ် ရေ သောက်ချင်ရာရွေး'
အံ့အားသင့်ဖို့ကောင်းစွာ ကောင်လေး ကျွန်တော်ထိုင်နေတဲ့ နေရာကိုလှမ်းလာတယ်။ ချီတံချတုံတော့ရှိတာပေါ့လေ။ ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာ ကျန်ခဲ့တဲ့ သူ့အ၀တ်ပုံကို တစ်ချက် လှည့်ကြည့်သေးရဲ့။ သူ ပခုံးတစ်ချက်တွန့်လိုက်ကာ ကျွန်တော်ကမ်းလှမ်းတာကို သဘောညီ ကြောင်း 'ညီ...ခဏနေရင် စားပါ့မယ်။ နည်းနည်း ၀မ်းဟာနေပြီဗ'ျ ပြောပါတယ်။ ကျွန်တော်နဲ့ ခြေလှမ်းနည်းနည်းအကွာမှာ ရပ်ရင်းပြော နေတာလေ။
ခြင်းတောင်းထဲက တဘက်အသန့်ကိုယူပြီး သူ့ကိုပစ်ပေးလိုက်တယ်။ လေထဲမြောက်ကနဲ လွင့်လာတဲ့ တဘက်ကိုယူပြီး ပါးချိုင့်နှစ် ဖက်ပေါ်လာအောင် သူပြုံးလိုက်ကာ 'ကျေးဇူး..အစ်ကို' လို့ပြောရင်း တစ်ကိုယ်လုံးခြောက်သွေ့အောင် သုတ်ပါတော့တယ်။ ကျွန်တော့် နံဘေးကို သူအသာဝင်ထိုင်ချိန်မှာတော့ တဘက်အစိုကို ကျွန်တော်ယူလိုက်ကာ ကျွန်တော့်အ၀တ်အစားတွေပုံထားတဲ့နားကို လှမ်းပစ် လိုက်ပါရဲ့။
ကျွန်တော် အအေးပုံးထဲက Coke နှစ်ဘူးယူလိုက်ကာ တစ်ဘူးသူ့ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်သား toast လုပ်လိုက်ကြ ရင်း နည်းနည်းစီ သောက်လိုက်ကာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မိတ်ဆက်ကြပါရဲ့။
နှစ်ဦးသားလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လိုက်ကြပါတယ်။ 'မကြာခဏ ကိုယ့်ရေကန်ကို မင်းရေလာကူးတာလားညီ ကိုယ်ကတော့ အလုပ်အားချိန် တိုင်းလာဖြစ်ပါရဲ့။ ဒီနေ့လည်း ရာသီဥတုက သာယာတာနဲ့လေ'
သူ့မျက်ဝန်းတွေပြူးကျယ်သွားကာ သက်ပျင်းချလိုက်ရင်း 'ဒီနေရာက အစ်ကို့နေရာ? အိုး...sorry အစ်ကိုရယ်၊ ညီမလာပါဘူး ဒီနေရာ ဟာ တစ်ဦးဦးပိုင်....'
'Relax. ညီ ဒီနေရာမှာ ရေလာကူးနိုင်တယ် ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်သစ်တောအုပ်လေးထဲမှာ လာပုန်းနိုင်ပါတယ်ကွ။ ဒီသစ်တောလမ်းလေးရဲ့ အဆုံးက ကိုယ့်အိမ်မှာလည်း လာနားနိုင်ပါတယ် အလည်ပေါ့။ ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ ၀ိုင်အေးအေးတွေ ဘီယာတွေ အဆင်သင့် မင်းကြိုက် တတ်တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်'
ကောင်လေး အပြုံးတွေပေးပြန်ပြီ။ သူ့မျက်ဝန်းတွေဟာ မသိမသာကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံးကို ကြည့်တယ်။ ကျွန်တော့်ပေါင်ဂွဆုံကို တစ်ချက်ပြန်ကြည့်ရင်း သူ့နှုတ်ခမ်းက စကားသံတိုးတိုးပေါ်ထွက်လာပါရော။ 'ရေကန်ထဲမှာ ကူးနေတုန်းကတည်းက ညီ့ကိုကြည့်နေတာ မြင်တယ်ဗျ။ ဘာကိုသဘောကျလို့ ကြည့်တာလဲဟင်'
ကျွန်တော့်ပါးပြင်တွေ ရှက်သွေးကြောင့် ပူနွေးသွားသလားခံစားရကာ ဘာပြန်ပြောရမှန်း မသိတော့ဘူး။ ကျွန်တော်ပြောနိုင်တာကတော့ သူမြင်ရတဲ့ မြင်ကွင်းကိုကြိုက်မှန်း။ အဲဒါကို ကျွန်တော်ကျေနပ်ပါတယ်။ သူ့ထက် ၁၀နှစ်ကျော်လောက်ကြီးတဲ့ အရပ် ၆ပေနဲ့ညီအောင် လေ့ကျင့်ထားတဲ့ ကျွန်တော့်ကိုယ်ခန္ဓာပုံရိပ်ကို သဘောကျနေတဲ့ဟာ။ ကျွန်တော့်ငပဲက သူ့ညီဘွား မာတောင်လာတဲ့ အခြေအနေရဲ့ တစ်လက်မလောက်တော့ ပိုရှည်မှာ။ ကျွန်တော့်ဆံပင်တွေက အုံထူပြီး မည်းနက်ပါရဲ့။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့်မျက်နှာက နုညံ့တဲ့ သူ့မျက်နှာ ထက်စာရင် ပါးသိုင်းမွှေးရေးရေးရှိတော့ ကြမ်းတယ်ပေါ့လေ။ သူ့မျက်ဝန်းတွေက အညိုရောင်ဖျော့ဖျော့ ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းတွေက အနက်ရောင် စစ်စစ်။
သူ့အကြည့်သူခိုးတွေက မမာ့တမာ ကျွန်တော့်ငပဲဆီရောက်ရောက်နေသား။ ကျွန်တော့်ခြင်းကြီးကို အလယ်ချပေးလိုက်ပြီး စားချင်တာ စားလို့ပြောလိုက်တယ်။ လတ်ဆတ်တဲ့ပေါင်မုန့်ချပ်တွေ၊ သုတ်ပြီးစားဖို့ ချိ(စ်)၊ စတော်ဘယ်ရီယို၊ ၀ိုင်နဲ့အတူမြည်းဖို့caviar ၊ ခပ်တုတ် တုတ် ၀က်အူချောင်းကျော်တွေအပြင် အိမ်နားက ဒေါ်နန်းစိန်လက်ဆောင်ပေးထားတဲ့ နာနတ်ယိုပါပါသေး။ ဒေါ်နန်းစိန်က သူ့အိမ်လုပ် ဂျယ်လီ တွေ၊ ယိုတွေကို အမြဲ ကျွန်တော်စားဖို့ပေးတယ်။ ပန်းကန်ပြားတစ်ချပ်၊ ဓားနှင့်ခက်ရင်း၊ လက်သုပ်ပ၀ါသန့်သန့်နှင့် ကျွန်တော် တို့ ပျော်ပွဲစားအသေးလေးကို ခင်းကျင်းလိုက်ပါရော။
ကျွန်တော်တို့ စကားမဆိုဘဲ စားသောက်နေကျတာ ပေါင်မုန့်တစ်ချက်ကိုက်လိုက် တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ခိုးကြည့်လိုက်။ ဗိုက်ဝ အောင်စားပြီးနောက် ကျွန်တော်အားလုံးခြင်းထဲသိမ်းလိုက်ပြီး နောက်ထပ်အအေးဘူးလေးတွေကို ယူလိုက်ပါတယ်။ အအေးမော့နေတုန်း မှာပဲ သူ့လက်သွယ်သွယ်တွေဟာ ကျွန်တော့်ပေါင်ခြံဆီ။ ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးကြား စကားလုံးတွေမှ မလိုတာပဲ။ ကျွန်တော့်လက်တွေကို သူ့ရင်အုပ်ဆီ ထားလိုက်ကာ သူ့နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို အသာအယာပွတ်သပ်မိပါပြီ။ ခပ်တိုးတိုးညည်းညူသံပေးလိုက်ရင်း သူ ကျွန်တော့်လက်မောင်းအစုံထဲ အသာခိုဝင်လာပါရော။ အတူဘေးချင်းယှဉ် လှဲလျောင်းလက်ပေါ့လေ။
ကျွန်တော့် စိတ်ထဲမှာ ဒီလိုရောင့်ရဲတဲ့ ခံစားမှုမျိုးတစ်ခါမှ မဖြစ်ဖူးဘူး။ အဲဒါပြီးတော့ ကျွန်တော့်အိပ်မက်ကနိုးထလာပါတယ်။ မနက်ခင်း တောင်ကုန်တော့မှာပါလား။ နောင်တသက်ပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်ကာ ရေချိုးခန်းဆီ ရေချိုးဖို့ ပါးသိုင်းမွှေးရိတ်ဖို့ ကျွန်တော်ရွေ့ရပါရဲ့။ အ၀တ်ဟောင်းတွေ အ၀တ်ခြင်းထဲထည့် မီးဖိုချောင်ထဲ နံနက်စာပြင်ဆင်ဖို့ ၀င်လာချိန်နာရီကိုတစ်ချက်ကြည့်တော့ ၁၁း၀၀နာရီ ထိုးနေ ပါပေါ့။ ကောင်းလိုက်တာ ဒီနေ့ စနေနေ့ပဲ။
ဒေါ်နန်းစိန်ပဲပေးထားတဲ့ သူ့ခြံထွက် ကြက်ဥလတ်လတ်ဆတ်ဆတ်နှစ်လုံးကို မကျက်တကျက်ကြော်လိုက်တယ်။ ပန်းကန်ပြားထဲ စတော် ဘယ်ရီယိုသုတ်ပေါင်မုန့်နှစ်ချပ်နှင့် အတူထည့်လိုက်ရတာပေါ့။ တစ်နေ့နေ့တော့ ဒီအန်တီကြီးရဲ့ မေတ္တာစေတနာအတွက် တစ်ခုခုတော့ လုပ်ပေးဦးမှပါ။ မနက်စာအဖြစ် မီးဖိုချောင်စားပွဲမှာ ပေါင်မုန့်၊ ကြက်ဥကြော်၊ လိမ္မော်ဖျော်ရည်တစ်ခွက်၊ ကော်ဖီခါးခါး တစ်ခွက်တို့ကို ထိုင်ပြီး စားသောက်ဖြစ်ပါတယ်။ Jelly ကိုမြင်တော့ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း မြင်မက်ခဲ့သော အိပ်မက်ကို သတိရမိရပါ၏။
အိပ်မက်ထဲက လူငယ်လေးဟာ တကယ်မဟုတ်ပေမဲ့ တွေးမိလိုက်တာနဲ့ ပေါင်ကြားက ညီဘွားကို ခေါင်းထောင်လာစေရော။ တွေးမိတာ လေးပျောက်သွားအောင် ခေါင်းကိုရမ်းကြည့်ပေမဲ့ ပျောက်မသွားပါဘူး။ ကြိမ်ခြင်းကြိးထဲ မုန့်ပဲသွားရေစာတွေထည့်၊ ပြီးတော့ အအေးပုံး ထဲ ဖျော်ရည်ဗူးတွေဖြည့်ကာ ရေကန်လေးဆီ သွားဖို့ ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ ဂိုထောင်ထဲက ဂျစ်ကားကို အသာထုတ် သစ်တောထဲက ဖုန်ထူထူလမ်းကတစ်ဆင့် ရေကန်ရှိရာဘက်ကို ခပ်ဖြေးဖြေး လိမ့်သွားမိပါရဲ့။
ခါတိုင်းရပ်တဲ့နေရာမှာပဲ ကားကိုပါကင်လုပ်၊ ယူဆောင်လာတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ဆွဲကိုင်ကာ ရေကန်နားက ကျွန်တော်နားခိုနေကျနေရာ လေးကို လမ်းသွယ်လေးအတိုင်း လမ်းလျှောက်လာလိုက်ပါတယ်။ သစ်ခွပန်းတွေအများအပြားရှိနေတဲ့ အပင်ကို ကျော်လိုက်တာနဲ့ မြင် လိုက်ရတဲ့ မြင်ကွင်းဟာ တကယ်အသက်ရှူမှားလောက်အောင်လှပပါရဲ့။ ဟိုးအရင် သုံးလေးပတ်လောက်က ကျွန်တော် သစ်တောတခွင် လှည့်ကြည့်တုန်းက ဒီရေကန်နေရာကို ရှာတွေ့ခဲ့တာ။ ခပ်အုပ်အုပ် ၀က်သစ်ချပင်ကြီးနားရောက်တော့ ၀တ်လာတဲ့ အ၀တ်အစားတွေကို ဆွဲချွတ်၊ သားရေရှူးကို ကန်ချွတ်၊ပြီးတော့ သက်ပြင်းတစ်ချက်ချကာ ညီညာနုညံ့တဲ့ မြက်ခင်းပေါ်လှဲလိုက်ပါတယ်။
အချိန်အတန်ကြာ ငြိမ်သက်အေးဆေးတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်လေးမှာ မျောနေပြီးနောက် ကျွန်တော်ထထိုင်လိုက်ကာ ရေခဲဗူးကိုဖွင့်လိုက်ပါ တယ်။ ကျွန်တော့်အကြိုက် ၀ိုင်ပုလင်းတစ်ခုဆွဲဖောက် ငုံသောက်လိုက်ရင်း ရေကန်တစ်ဝိုက်ခြုံငုံကြည့်နေမိပါရဲ့။ Andy ဆိုတဲ့ ဘိုဆန် ဆန်ကောင်ကလေး ကျွန်တော့်ဆီလှမ်းလာတာကို မျှော်လင့်နေမိပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ အခုတော့ တစ်ယောက်တည်း။ သက်ပျင်းတစ်ချက်ချ ပုလင်းလေးထဲက လက်ကျန်ကို မော့ကာ ပက်လက်အိပ်လိုက်ပါတယ်။ မျက်ဝန်းများကို အသာမှိတ်လိုက်စဉ်မှာတော့ ကျွန်တော် လျှင်လျှင်မြန်မြန်ကို အိပ်မောကျသွားရတာ။
နွေးထွေးတဲ့ အပွေ့အဖက်၊ စိုစွတ်နေတဲ့ နှုတ်ခမ်းအစုံနှင့် အားရပါးရ အနမ်းခံရတာတွေကြောင့် ကျွန်တော်နိုးထရပါပြီ။ အိပ်မက်ဟာ ဘယ်နေရာမှာ ရပ် ဘယ်နေရာက ဆက်ဆိုတာ အလိုလို ဖြစ်နေတာလို့ ထင်ပါရဲ့။ သူ့အာခံတွင်းထဲမှ ပူနွေးနေတဲ့ လျှာဟာ ကျွန်တော့် အာခံတွင်းအနှံ့ ထိတွေ့နေတာ တကယ့်အစစ်အမှန်အတိုင်း ခံစားရပါတယ်။ ဒါအိပ်မက်တစ်ခု မဖြစ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ သေးသွယ်ကျစ်လစ်တဲ့ သူ့ကိုယ်လေးဟာ ကျွန်တော့် လက်မောင်းတွေထဲ ရောက်နေသလို မာပြီးတောင်နေတဲ့ သူ့ညီဘွားဟာလည်း ကျွန်တော့်ပေါင်ခြံက အမြှောက်တံနှင့် ပွတ်တိုက်နေပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့လက်တွေဟာ နှစ်ဦးသားခန္ဓာကိုယ် အနှံ့ပွတ်သပ်၊ ဖျစ်ညှစ် ခံစားမှုတွေ မြှင့်တင်နေကြပါတယ်။ ကျွန်တော့်လက်ချောင်း တွေဟာ ရှည်ရှည်ထွားထွား သူ့ငပဲ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ပွတ်သပ်ရင်း အံ့အားသင့်စဖွယ် ရွှေဥတွေကို ကလိပေါ့။ ဖယောင်းတိုင်တွေလို အရွယ်ညီတုတ်ခိုင်တဲ့ ကျွန်တော့်လက်ချောင်းအချို့ကို ကောင်လေးပါးစပ်ထဲ စုပ်ပြုဖို့ ပန်းနုရောင် နှုတ်ခမ်းပေါ်တင်ပေးလိုက်တာ သူ တကယ့်ကို စိတ်နိုးထလာအောင် နှုတ်ခမ်းသားတွေ လျှာတွေနှင့် ကစားတယ်လေ။ စိုစွတ်နေတဲ့ လက်နှစ်ချောင်းကို ဖြိုးဖြိုးအိအိ သူ့ တင်ပါးအလယ်က ခရေပေါက် ကျဉ်းကျဉ်းလေးထဲ ကျွန်တော် ခပ်ဖြေးဖြေး ဖိထည့်လိုက်မိပါတယ်။
'ညီလည်း အဲဒါကို လိုချင်နေတာ' ခပ်တိုးတိုး သူညည်းညူလိုက်ရင်း ကျွန်တော့်ကို ရီဝေေ၀ကြည့် တယ်။
Andy ပက်လက်အနေအထားမှာ ဒူးကိုရင်ဘတ်ဆီကွေးတင်ရင်း လက်နှစ်ဖက်နှင့် ထိန်းထားတော့ ကျွန်တော်က တံတွေးချောဆီကို လက်ထဲထွေးထည့် ငပဲကိုမံလိုက်ပြီး ကွမ်းသီးခေါင်းကို ခရေပေါက်ဆီ တေ့လိုက်ပါတယ်။ နှစ်ဦးသား အသက်ရှူသံတွေက မြန်လာသလို ပါပဲ။ ကျွန်တော် တဖြေးဖြေးခြင်းဖိသွင်းနေစဉ် သူရုတ်တရက် ဖင်ကိုလှုပ်ပြီးဆောင့်လိုက်တာ ငပဲတစ်ချောင်းလုံးနီးပါး ၀င်သွားရော။ သူ လည်း အောင့်သွားတယ်ထင်ရဲ့ ခဏငြိမ်သွားသလို ကျွန်တော်လည်း သွေးကြောထဲထိ ဆိမ့်ကနဲဖြစ်သွားရကာ ဆက်မလှုပ်ရှားဖြစ်။
ဟူး....ခပ်အေးအေး လေတစ်ချက် တိုက်လိုက်တာကြောင့် ကျွန်တော် သက်ပြင်းမောနှင့်အတူ နိုးထရပါရော။ ကျွန်တော့်စိတ်တွေ မာန် ဟုန်ပြင်းနေပြီး ကျွန်တော့်ငပဲဟာလည်း အရမ်းမာနေတာကြောင့် လက်ကစားလိုက်ရပါပြီ။ အိပ်မက်ထဲက ခံစားချက်တွေဟာ အမြင့်ဆုံး orgasm ဖြစ်တဲ့အထိ ပေးစွမ်းပါသေးတယ်။ အောက်ကခင်းထားတဲ့ အခင်းလည်း ချွေးနှင့်အတူ သုတ်ရည်တွေဖြင့် ရွှဲသွားရပါရော။
နောက်ဆုံးတော့လည်း အောက်အခင်းနဲ့ပဲ တစ်ကိုယ်လုံးသုတ်သင်သန့်ရှင်းလိုက်ပါတယ်။ ခြင်းကြီးထဲကို ယူဆောင်လာတဲ့ပစ္စည်းတွေ ပြန်ထည့်တော့မှ ယူလာတဲ့အစားအသောက်တွေထဲ စားစရာတွေ တစ်ခုမှမထိမိကြောင်း သတိထားမိတော့တာပါ။ ရှပ်အင်္ကျီဝတ်၊ ဂျင်း(န်) ဘောင်းဘီကို ကောက်စွတ်၊ ပြီးတော့ ညစ်ပတ်နေတဲ့အခင်းကို ခေါက်လိုက်ကာ ခြင်းထဲကိုထည့်လိုက်ပါတယ်။ မလှမ်းမကမ်းမှာ ချွတ် ထားတဲ့ သားရေဖိနပ်ကိုဝတ်ပြီးတော့ ကားဆီအပြန်ခြေလှန်းတွေစခဲ့ပါရဲ့။ အိမ်ကိုပြန်ရောက် တံခါးဝအရောက်မှာတော့ တစ်ယောက် တည်း အထီးကျန်တဲ့ ခံစားမှုကြီး စတင်ခံစားမိပါ၏။
ကျွန်တော့်မှာသူငယ်ချင်းအများကြီးမရှိ။ အလယ်တန်းကျောင်းတက်တုန်းကလည်း တိုင်းရင်းသားဆိုလို့ ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်း။ တက္ကသိုလ်တက်နေတုန်းမှာတော့ မိသားစုက ရပ်ဝေးမြေခြားထွက်ခွာသွားကြတယ်။ ကျွန်တော့်အသွင်အပြင်က အတော်ကြည့်ကောင်း တဲ့ အထဲမှာပါပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ boyfriend တစ်ယောက်ပဲရှိခဲ့ဖူးပြီး မိန်းကလေးတွေဆိုရင် ကျွန်တော့်အတွက် ဘယ်တော့မှ turn-on မဖြစ်စေခဲ့ပါဘူး။ ကျွန်တော့် bf က တိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းရှာဖို့ဆိုပြီး သင်္ဘောလိုက်သွားလေရဲ့။ အဆက်အသွယ်ကတော့မပြတ် ပါဘူး။ ကျွန်တော့်အသက် ရှင်သန်မှုနှင့် သူ့အသက်မွှေးမှုကကွာခြားကြတာကိုး။ အခုတော့ သူ ကျွန်တော့်ထက်သာတာ ရသွားပြီထင်ပါ တယ်။ ကျွန်တော်က နည်းပညာကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းတွေ ဦးစီးပေးသော အကြီးစားစက်ပစ္စည်းတွေ ပြင်ဆင်ပေးနိုင်တဲ့ ဆိုင်ကြီးတစ်ခုဖွင့် ထားပါတယ်။ ဆိုင်က အခြေအနေကောင်းတာကြောင့် မြို့ဝန်းကျင်မှာ ဆိုင်ခွဲနှစ်ခုဖွင့်ထားပါ၏။
အသက်၃၀၀န်းကျင်အမျိုးသားအတွက် အေးအေးဆေးဆေးအငြိမ်းစားနေဖို့ စဉ်းစားတာစောများနေသလား ထားပါ...အ၀တ်တွေ အားလုံးချွတ် ရေပန်းအောက် ၀င်နေချိန်မှာ ရေစက်တွေရဲ့ ထိတွေ့မှုက ပိုသာယာပါတယ်။ အင်း...ကျွန်တော့်အတွက် လုပ်သက် ၅နှစ်နီးပါးရှိပြီ ဖြစ်တဲ့ မန်နေဂျာ ဇော်ဦးလွင်ကို ခေါ်ပြီး စီစဉ်စရာရှိတာ စီစဉ်ဦးမှပါပဲ။ အဓိကဆိုင်မှာ လည်းကောင်းကောင်း စီမံခန့် ခွဲနိုင်သလို ဆိုင်ခွဲနှစ်ခုမှာလည်း အလားတူကောင်းကောင်း စီမံအုပ်ချုပ်မှုပေးနိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။ မြို့ထဲမှာမနေပဲ သစ်တောအစပ်က ဒီအိမ် မှာ နေဖြစ်နေတာဆိုတော့ သူလာလို့အဆင်ပြေပါ့မလားမသိ။ ခရီးရှည်ကြီးတစ်ခုထွက်ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်.....ကျွန်တော်သွားချင်နေတဲ့ နေရာတွေကို ကမ္ဘာတစ်ပတ် ဖြစ်ချင်ဖြစ်မပေါ့။
တနင်္ဂနွေည၊ ကျွန်တော့်အိပ်မက်က ပြန်လည်ခရီးဆက်ပါရော။ ကျွန်တော် Andy ကို -ိုးနေခဲ့တာလေ ၀က်သစ်ချပင်ကြီးအောက်မှာ။ အိုး....ဖီလင်အရမ်းမိုက်တယ် ခပ်ကြပ်ကြပ် ခရေပေါက်ထဲ အားနှင့် အရှိန်မပြတ်ဆောင့်ချိန်မှာ သူလည်းနာကျင်မှုကို ကြိတ်မှိတ်စရာမလို စိတ်တိုင်းကျ အော်ဟစ်နိုင်တာကြောင့် ချုပ်တည်းမှုမရှိသူ့အသံက ကျွန်တော့်ကို ပိုမိုစိတ်လှုပ်ရှားစေပါတယ်။ ကျွန်တော့်ငပဲက သူ့ခရေ၀ ထဲအ၀င်အထွက်ပြုချိန်မှာ သူ့ငပဲဟာ ကျွန်တော့်ဗိုက်ကြွက်သား အန်စာတုံးတွေနှင့် ပွတ်သပ်နေရော။ ခဏအကြာမှာတော့ နှစ်ဦးသား အမြင့်ဆုံးပန်းတိုင်ကို မရှေ့မနှောင်းရောက်ကြပါပြီ။ ချွဲပျစ်ပျစ်အရည်တွေဟာ ကျွန်တော့်ဗိုက်သားနှင့် ရင်အုပ်တွေမှာ ဖွေးနေပါတယ်။ နှစ်ယောက်သားအတူလှဲလျောင်းရင်း အသက်မှန်အောင်ရှူကာအပြင်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးတဲ့အထိမာနေဆဲ ကျွန်တော့်ငပဲကိုကြည့်ပြီး ရယ်မော မိပါတယ်။
'အစ်ကိုရယ်....အရမ်းကောင်းတာပဲ။ ညီတို့နေ့တိုင်းအတူတူရှိရင်ကောင်းမှာ။ ညီ သိတယ်...တွေ့ဆုံရုံလေးပဲရှိသေးတာ အစ်ကိုနဲ့လေ။ ဒါပေမဲ့ ညီ...အစ်ကို့ကိုချစ်မိသွားပြီဗျာ'
'ညီ့ကိုချစ်ပါတယ် အစ်ကိုလဲ။ ဒါပေမဲ့ ဒါဟာအိပ်မက်တစ်ခုပါ။ ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာရှိနေတတ်တဲ့ ပြီးပြည့်စုံအဖော်မွန် ပုံသဏ္ဌာန်လေးတစ်ခု ထင်ပါရဲ့။ ညီဟာ အစစ်အမှန်လူသားဖြစ်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုပါတယ်'
သူ့ရဲ့ လှပတဲ့မျက်နှာလေးမှာ စိတ်ရှုပ်ထွေးသွားဟန် ပေါ်လာတာကို နောက်ဆုံးငေးကြည့်ရင်း ချွေးအရွှဲသားနဲ့ ကျွန်တော်နိုးလာပါတယ်။
'Noooooo!' ကျွန်တော့်အသံ တဆုံးအော်လိုက်မိသံဟာ မနက်စောစော မှောင်ရိပ်ထိုးနေဆဲမှာ ပေါ်ထွက်လာရပေါ့။
တနင်္လာ ၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့များမှာ ကျွန်တော့်စီးပွားရေးကို ကောင်းကောင်း ဂရုတစိုက် စီမံခန့်ခွဲနိုင်ခဲ့လို့တော်ပါသေးတယ်။ ကိုယ့်စီးပွား တိုးတက်ဖို့ မစိုးရိမ် စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ်ဖြစ်ချင်မိအောင် အိပ်မရခဲ့တာ နှစ်ညရှိခဲ့ပြီ။ အိပ်မက်ထဲကို နောက်တစ်ကြိမ် ကျွန်တော်မသွား ချင်တော့ဘူး။အိပ်မက်က နိုးထလာတာနဲ့ Andy ကထွက်သွားမှာပဲ မဟုတ်လား။ ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းတွေမှာ မျက်ရည်တွေဖြင့် စိုစွတ်ပြီး ကျန်ရစ်ဖြစ်နေခဲ့ရတာ။
အေးအေးသက်သာကြည်နူးဖွယ်အရာတစ်ခုကနေ အိပ်မက်ဆိုးတစ်ခုအသွင်ဖြစ်လာနေပြီ။ နည်းနည်းလေး အိပ်ပျော်လိုက်တာနဲ့ အိပ်မက်တွေနဲ့ပြည့်တော့မှာ။ Andy က သူ့သဏ္ဌာန် ဟန်ဟာ တကယ့်အစစ်အမှန် ထပ်ထူညီတဲ့ ကျွန်တော့်စိတ်ကူးထဲက ချစ်သူဆိုတာ နားလည်စေဖို့ ကြိုးစားနေမှုများလား။ သူနှင့်လိင်ဆက်ဆံရတာ ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံးတုန်ခါနေအောင် ကျေနပ်ရသလို နိုးထလာ ချိန်ထိ ဘယ်လိုမှ မရပ်တည်နိုင်ဖြစ်စေပါတယ်။ အဲဒါ အစစ်အမှန် မဟုတ်မှန်း ကျွန်တော်သိနေခဲ့ချိန်တွေရဲ့အဆုံးစွန်မှာတော့ ကျွန်တော့် စိတ်တွေဟာ လေဟာနယ်ဖြစ်သွားပါပြီ။ ဟင့်အင်....နှစ်ပေါင်းများစွာ အထီးကျန်နေခဲ့ရတာ အခုရော အထီးကျန်နေရတော့မှာလား။
သြဂုတ်လရဲ့ တောက်ပတဲ့ မနက်ခင်းတစ်ခုမှာ ကြိမ်ခြင်းကြီးကို နောက်ဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ပြင်ဆင်လိုက်ပါတယ် အရင်တစ်ခါထည့်တဲ့ ပစ္စည်းများနှင့်မတူသောအရာတွေကိုပေါ့။ ပစ်စတို တစ်လက်ရယ် ကျည်ဆန်တစ်ဘူးရယ် မြို့ထဲက ကျွန်တော်ဝယ်ခဲ့တယ်။ သေနတ် ထဲမှာ ကျည်ဆန်ဖြည့်ပြီးသားပါ။ အိပ်မက်က ကျွန်တော်တဖန်နိုးထလာတာနဲ့ ပစ်စတိုက ကျွန်တော့်လက်ထဲမှာဆိုတော့ ပစ်ဖို့အသင့် ပေါ့နော်။
ဒေါ်နန်းစိန်ရဲ့ အိမ်ဘေးက အဖြတ် နောက်ဆုံးအကြိမ်အဖြစ် လက်ဝှေ့ရမ်းပြ နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း ကားပါကင်ထိုး၊ ရေကန်ရှိရာ ကျွန်တော် ခပ်နှေးနှေးခြေလှမ်းတွေဖြင့် သွားနေပါရဲ့။ ကျွန်တော့်စိတ်နှလုံးတွေဟာ အရင်ရောက်ခဲ့တဲ့ နေ့များထက် ပိုပေါ့ ပါးနေသယောင်။ ၀က်သစ်ချပင်ရဲ့ အရိပ်အောက် ကျွန်တော့် Andy လေး ယိုင်နဲ့နဲ့ အိပ်မက်ထဲမှာ ထာဝရတွေ့ဆုံဖြစ်တော့မယ့် အစီ အစဉ်။ ကမ္ဘာတပတ် ခရီးစဉ်မထွက်ဖြစ်တော့ဘဲ အိပ်မက်ကမ္ဘာထဲ သွားတော့မယ့် ကျွန်တော်ရယ်လေ။
လမ်းသွယ်လေးထဲ ၀င်လာရင်း ကျွန်တော့်အတွေးစိတ်အလျဉ်ဟာ လေဟာနယ်ထဲ ပိုရောက်လာသလိုပဲ။ သာယာလှပတဲ့ ဒီရေကန် ဒီဝန်းကျင် နောက်တစ်ခါ...အား...ဘာမှမတွေးတော့ဘူး စိတ်ထဲက ထုတ်ပစ်။ နောက်ဆုံးခရီးတစ်ခုကို ပျော်ပျော်နေဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက် ပါတယ်။ လမ်းအတိုင်း မနှေးမမြန်လာလိုက်တာနောက်ဆုံးတော့ ရေကန်နားကို နီးကပ်ရောက်ရှိလာပါပြီ။
၀က်သစ်ချပင်အောက် အကြည့်ကိုရွေ့မိတော့ ကျွန်တော့်ခြေလှမ်းတွေ ရုတ်တရက် ရပ်တန့်သွားခဲ့ပါပြီ။ ကျွန်တော်မြင်ခဲ့ရတာကို မယုံနိုင် ပါဘူး။ သစ်ပင်အိုကြီးရဲ့ အောက်က မြက်ခင်းကမ္ဗလာမှာ Andy လှဲနေတာ။ ကျွန်တော့်ခေါင်းကို ခါရမ်းပစ်လိုက်ပါတယ်။ အခုအချိန် အိပ်မက်တစ်ခု လုံးဝမဟုတ်ဘူး။ ပက်လက်အိပ်လျက်၊ လက်တစ်ဖက်ကို သူ့မျက်ဝန်းပေါ်မှေးတင်ကာ အ၀တ်မဲ့ သူအိပ်ပျော်နေတာ။ လက်က သယ်လာတဲ့ပစ္စည်းတွေကို ကျွန်တော် ပစ်ချပြီး သူ့ဆီပြေးသွားမိကာ လှုပ်နိုးမိပါရော။
လှဲအိပ်နေရာက ထထိုင်၊ သူ့မျက်လုံးတွေကို ပွတ်သပ်ရင်း ကျွန်တော့်ကို တည့်တည့်ကြည့်တယ်။ မျက်ဝန်းတွေ ပြူးကျယ် ပါးစပ်က အံ့သြ၀မ်းသာသံထွက်ကာ 'ကိုကျော်ဇင်...အိပ်မက်မဟုတ်ပါဘူးနော်'
သူ့နံဘေးကို ကျွန်တော်ဝင်ထိုင်ပြီး အပျော်တွေအပြည့်ဖြင့် သူ့ကိုဖက်ကာ အမေးကိုဖြေလိုက်ပါတယ် 'အချစ်လေးရယ် ဒါတကယ့် အစစ်အမှန်ပါ'
'ညီ့အထင် တီဗီရှေ့က ဆိုဖာပေါ် ဇာတ်လမ်းတွဲထိုင်ကြည့်ရင်းအိပ်ပျော်သွားတာ။ ဒါအိပ်မက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သေချာလားအစ်ကို'
ကျွန်တော့်ခေါင်းကိုသွက်သွက် ငြိမ့်ပြလိုက်ပါတယ်။ 'အိပ်မက်ဖြစ်ခဲ့ရင်တောင် မနိုးထချင်တော့ဘူး။ မင်းဟာ အစစ်အမှန်ဆိုတာ ယုံကြည် ဖို့ ကိုယ့်အတွက်ခက်ခဲခဲ့တယ်။ မင်းနဲ့အတူ အမြဲနေနိုင်ဖို့ဆို ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေလိုက်တာ တစ်နည်းပဲရှိတယ်လို့တွေးခဲ့တာ။ ဒါကြောင့် ဒီနေရာကို ကိုယ်ရောက်လာတာလေ'
ခေါင်းကို အသာဆတ်ပြလိုက်ရင်း 'ဟုတ်တယ်..လမ်းသွယ်လေးအတိုင်းဆင်းသွားရင် သစ်တော့ကြီးရဲ့ အစပ်က အိမ်မှာနေတာ။ ဒါပေမဲ့ ...ညီ...မင်းဘယ်မှာနေတာလဲ အိပ်မက်ထဲမှာ မင်းဘယ်မှာနေလဲ မမေးခဲ့ဖူးဘူးကိုယ်'
'ညီ ဒီရေကန်နဲ့ဆို မိုင်ငါးဆယ်လောက်ဝေးမယ်နေတာ။ ဒါပေမဲ့ ညီ့ဦးလေးအိမ်ကို လာလည်နေတာ နှစ်ပတ်မကတော့ဘူး။ သူ့အိမ်က အစ်ကို့အိမ်နဲ့ နည်းနည်းပဲဝေးတယ်။ ညီရေကန်နားရောက်နေတာဆိုတော့ ဦးလေးအိမ်မှာ မရှိနိုင်ဘူး ဟုတ်တယ်ဟုတ်'
အကြောင်းရင်းကို ရှာဖို့နည်းလမ်းတစ်ခုပဲ ရှိတော့တယ်။ ကျွန်တော့်ကားပေါ် သူ့ကိုတင် ရေကန်ကိုထားပစ်ခဲ့လိုက်တာပေါ့။ ကားပေါ် အတက် သူ့ကိုယ်ပေါ်မှာ အ၀တ်မရှိမှန်း သတိထားမိသွားပြီး သူ့မျက်နှာ ရဲရဲနီသွားပါတယ်။
'ကောင်းပြီ' ဒေါ်နန်းစိန် အပြင်ထွက်သွားလောက်ပါတယ်။ 'ရာသီဥတုက အရမ်းပူတော့ ဥယျာဉ်ထဲထွက်ပြီး အလုပ်လုပ်လား မထွက်ဘူး လား မသေချာဘူး။ သူ့အိမ်က ကိုယ့်အိမ်နှင့် သစ်တောလမ်းအကြားမှာရှိတယ်။ တကယ်လို့ သူအပြင်မှာဆို ကိုယ်တို့ အခြေအနေ ကြည့်ပြီး ကိုယ့်အိမ်ထဲရောက်အောင်ကြိုးစားကြတာပေါ့'
အိမ်နားကိုအရောက် ဒေါ်နန်းစိန်အိမ်ဘက်ကို တစ်ချက် check လိုက်တာ သူ့အိမ်မှာမြင်နေကျ လိပ်ခုံးကားလေးမရှိဘူးဆိုတော့ အပြင် ထွက်သွားပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်သား ခပ်အေးအေး ကျွန်တော့်အိမ်ဆီ ၀င်လို့ရသည်ပေါ့။ Andy ပြောတဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ကို ဖုန်း ခွက်ကိုအသာမ ပြီး နှိပ်လိုက်ပါတယ်။ မိနစ်အနည်းငယ်အကြာမှာတော့ ခပ်သြသြအသံနှင့် တုန့်ပြန်သံကိုကြားရပါရဲ့။
'မရှိဘူးကွ၊ ဦးအိမ်ပြန်ရောက်တော့ သူထွက်သွားပြီ။ သူ့ကားက ဦးခြံထဲက ဂိုထောင်ထဲမှာပဲဆိုတော့ သူငယ်ချင်းတွေနှင့် အပြင်ထွက် သွားတာဖြစ်မယ်။ ဘယ်သူခေါ်တယ်လို့ ပြောပေးရမလဲ?'
ဖုန်းလက်ကိုင်ခွက်မှာ နေသားတကျပြန်ထားလိုက်ကာ Andy ဘက်ကို ကျွန်တော် ရွှင်ပျသောအပြုံးမျက်နှာဖြင့် လှည့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။
ဖွင့်ထားတဲ့ ကျွန်တော့်ရင်ခွင်ထဲ Andy အပြေးလေးခိုနားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ မသိခဲ့ ဘယ်လိုထူးဆန်းတဲ့အရာက အိပ်မက်တွေကို အမှန်တရားဖြစ်စေခဲ့သလဲဆိုတာ။ ဒါပေမဲ့ တစ်ခုခုတော့ ဖြစ်နေခဲ့တာပါ။ သူကျွန်တော့်ကို အိပ်မက်နေတဲ့အချိန်မှာပဲ ကျွန်တော်သူ့ကို အိပ်မက်နေခဲ့တာ။ နှစ်ယောက်သားရဲ့ ကမ္ဘာပေါင်းစပ်နိုင်ခဲ့ခြင်းပါပဲ။
နောက်ဆုံး....ကျွန်တော့်ဘ၀ရဲ့ အချစ်ဆိုတာကို ကျွန်တော်ရှာတွေ့ခဲ့ပါသည်။
စာကြွင်း။ ။ အချစ်အကြောင်းပါးပါးလေးထည့်ရေးထားတာကိုသဘောကျပါတယ်ဆိုတဲ့ ပရိသတ်တစ်ယောက်အတွက်ပါ။